Akụkọ Farah Kim na Martech Zone |
Edemede site na Farah Kim
Ndị ahịa na-enwe nrụgide dị ukwuu ka a na-eduzi data. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​gaghị ahụ ndị na-ere ahịa na-ekwu maka adịghị mma data ma ọ bụ na-ajụ enweghị njikwa data na nwe data n'ime òtù ha. Kama nke ahụ, ha na-agbalịsi ike iji data ọjọọ na-eduzi ha. Ọdachi dị egwu! Maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa, nsogbu dị ka data ezughị ezu, typos, na oyiri ndị a na-aghọtaghị dị ka nsogbu. Ha ga-eji ọtụtụ awa dozie ihie ụzọ na Excel, ma ọ bụ na ha na-eme nyocha maka plugins iji jikọọ data